Ingosi yokuxhumana ngobuchwepheshe eKolishi lezesiNtu esihloko sithi: Conceptualisation, Implications and Patterns of Femicide During COVID-19 and Preventative Measures ibinoSolwazi Mzikazi Nduna (wase-Wits University) noDkt Amira Paripurna (wase-Universitas Airlangga, e-Indonesia).
Le ngosi ibisiholwa nguSolwazi Nirmala Gopal (wase-UKZN), kanti ibizwe nguDkt Ephraim Sibanyoni (wase-UKZN).
UNduna ubheke ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane, ukubulawa kwabo nomvalelwandlini we-COVID-19 eNingizimu Afrika, izinto ezivimba abantu besifazane ukuba bashiye ubudlelwano obugcwele ukuhlukunyezwa, izinto ezingenziwa ukugwema ukubulawa kwabantu besifazane nezinto ezenza kungaziwa kahle ngokubulawa kwabantu besifazane ngesikhathi somvalelwandlini. ‘ENingizimu Afrika kunyukile ukudlwengulwa nokubulawa kwabantu besifazane ngesikhathi somvalelwandlini we-COVID-19 wangonyaka wezi-2020, kwaba nezigameko ezidumile eziqubule ukuphawula ezinkundleni zokuxhumana, zenza kwaba nemikhankaso yokubhekana nako. Njengoba abantu behlala ndawonye ngoba bevalelekile ekhaya, abantu besifazane nezingane basengozini yokuhlukunyezwa,’ kusho yena.
UNduna ukholwa wukuthi ukubulawa kwabantu besifazane akuyona into entsha kodwa kuwukuqhubeka kwento ebivele yenzeka yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane okubhebhezelwa ngamasiko akhona emphakathini. ‘Ibhekiswe kubantu besifazane ngemikhuba evamile emibi nehlukumeza abantu besifazane ebangwa yizenzo zamadoda. Uma kukhulunywa ngokushintshwa kwemikhuba yomphakathi ehlukumeza abantu besifazane, abantu abaningi bayazihlangula.’
Uphakamise ukuthi kuncishiswe ubunikazi bezibhamu nokukhuthazwa kokuthi abantu basheshe behlukane nokuhlukanisa umshado. ‘Kufanele kube nokuphepha kubantu besifazane abehlukanisayo nakulabo abehlukanisa umshado lapho obekunokuhlukumeza khona. Sesiphelile isikhathi sezingxoxo - kufanele senze!’
U-Paripurna ugxile ezinselelweni nasemathubeni ekugwemeni ukuhlukumeza kwasekhaya emphakathini wamaSulumane wase-Indonesia. Uveze ukuthi uhulumeni uyehluleka ukuxazulula ukungezwani ngokusebenzisa umthetho, okubaphoqa ukuthi baphucule umthetho nezindlela zomthetho zikahulumeni nezenkolo zemishado, okubanga ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane ekhaya.
‘Ukubandlulula ngobulili emthethweni olawula imindeni kubhebhezele ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Okunye, ezindabeni eziningi ezibikwa ngabezindaba nasemphakathini kubhekwa owesilisa nothando lwakhe, bakhohle izwi lomuntu wesifazane (obulewe). Umphakathi uloku ubheka izigilamkhuba, ulalela izindaba zezigilamkhuba. Naphambi komthetho izwi elivame ukuzwakala nombono obekwayo kuba owezigilamkhuba,’ kusho uDkt Paripurna.
Uthe ukuphasiswa komthetho olwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ekhaya kuletha ithemba lokuqedwa kokuhlukumeza abantu besifazane emakhaya e-Indonesia. ‘Umthetho uchaza kabanzi izinhlobo zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane, ubeke nemithetho elungele ukuzinqanda. Kepha noma kunjalo, umthetho uwodwa awenele uma ungahambisani nemizamo yokushintshwa kwemithetho yezomndeni yase-Indonesia, esabhebhezela ukuhlukumeza abantu besifazane,’ kusho yena.